December 2018 – Kalfadhi
December 31, 2018 December 31, 2018 Kalfadhi
Kulanka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay ahayd inuu dhaco maanta, si ay uga doodaan Miisaaniyadda 2019-ka, ayaan si rasmiya u qabsoomin. Hase ahaatee si gooni gooniya, oo ay asaxaafaddu dibad joog ka ahayd, ayey maanta Sanataradu ugala doodeen Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa uu Goluhu ka yeelayo Qoondada Miisaaniyadda 2019-ka oo uu Golaha Shacabka shalay meel mariyay, islamarkaana Wasaaradda Maaliyaddu aysan wali horgeyn Aqalka Sare. Sida ay Xildhibaanno ka tirsan Golaha Aqalka Sare u xaqiijiyeen Kalfadhi, Sanatarada qaarkood ayaa, si aan rasmi ahayn, ugu soojeediyay…
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa goor dhaw saxiixay Sharciga Dhismaha Hay’adda Naafada Soomaaliya. Xarunta Villa Soomaaliya munaasabad lagu qabtay, oo ay ka qeyb galeen Golayaasha Dowladda iyo Xubno ka socda Naafada Qaranka, ayuu Madaxweynuhu ku saxiixay hindisahan oo maanta isu beddelay Xeer Qaran, oo ka mid noqon doona shuruucda dalka. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu Golayaasha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Xubno ka tirsan Naafada Dalka hortooda ku saxiixo maanta Sharciga Dhismaha Hayadda Naafada Qaranka. “Xaqiiqatan, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Baarlamaanka sharafta leh,…
Aas Qaran ayey maanta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) Muqdisho ugu sameysay Marxuum Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), oo shalay si kedis ah ku geeriyooday. Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyrre, ayaa labaduba waxay ka qeyb galeen aaska iyo ku tukashada Saalaadda Jannaasada Marxuumka. Masjidka Shuhaddaa, oo Madaxtooyada Soomaaliya ku dhex yaala, ayey Marxuumka sidoo kale ku tukashada Salaaddiisa Jannaasada kaga qeyb galeen Xildhibaanno iyo Wasiiro ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Dhamaan Madaxda iyo Masuuliyiinta Dowladda waxay u duceeyeen Marxuumka,…
Golaha Aqalka Sare ayaa maanta yeelanaya kulankiisa 13-aad oo qeyb ka ah Kalfadhiga 4-aad ee Golaha. Shaqada ugu weyn ee uu Goluhu ku qaban doono kulankiisa maanta ayaa la filayaa iney noqoto ka doodista iyo meel marinta Hindisaha Miisaaniyadda 2019-ka, oo maanta lagu wado in la gaarsiiyo. Miisaaniyaddaas waxaa shalay cod aysan u kala harin Xildhibaannadu ku ansixiyey Golaha Shacabka. 174 Xubnood oo Kulankii shalay joogtay ayaa meel-marisay. Arrintaas waxaa aad ugu riyaaqay Wasaaradda Maaliyadda oo uu Wasiirkeeda, Cabdiraxmaan Beyle, sheegay inuu ku farxay go’aanka Golaha Shacabka uu, isagoon midna…
Golaha Shacabka ayaa shalay ansixiyay Miisaaniyadda Dowladdu ku shaqeyn doonto sannad maaliyadeedka ka bilaabmaya 1-da Janaayo 2019-ka oo berri ka bilaabanaya, kuna dhammaan doona 31 December, 2019-ka. Waxaa Xeerka Dhaqan-Gelinta Miisaaniyadda la hor geynayaa maanta Golaha Aqalka Sare, oo isu diyaarinaya inuu ka doodo, kadibna meel mariyo isla maanta ama berri. Haddaba, warbaahinta Kalfadhi ayaa kuu soo koobeysa illaha laga filayo dakhliga miisaaniyadda, qoondada xafiisyada dowladda iyo deeqaha. Miisaaniyadda 2019-Ka Wadarta guud ee miisaaniyadda sannadka 2019-ka waa $340,060,149. Waxay dhowr milyan dheer tahay miisaaniyadda sanadkii hore oo gaaraysay 274.6 Milyan…
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa ka tacsiyeeyey geerida laba Xildhibaan, oo shalay ku dhintay magaalada Muqdisho. Labada Xildhibaan ee geeriyootay ayaa midna uu ka tirsanaa Golaha Shacabka, kan kalena Golaha Wakiillada Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS). Madaxweyne Farmaajo waxaa, qoraal uu ku daabacay Barihiisa Bulshada, uu uga tacsiiyey geerida labadan XIldhibaan, oo kan ka tirsanaa Golaha Shacabka lagu magacaabo Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), kan ka midka ahaa Golaha Wakiillada KGS-na la yiraahdo Kheyre Maxamed Axmed. “Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qarankaba, waxaan tacsi tiiraanyo leh…
Shir ay yeeshaan Golaha Wasiirada Xukummadda Soomaaliya kii ugu dambeeyey sanadkan ayey ku meel mariyeen Hindise Sharciyeedka Maamulka Dakhliyada dalka. Hindisahan waxaa soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyadda, waxa ayna Xukumaddu ka shqeeneysaa iney u gudbiso Golaha Wakiilada, oo lagu wado iney uga doodaan Kalfadhigooda 5-aad. Hindisahan ayaa lagu dhex diyaariyey siyasadda soo ururinta dakhliga dalka iyo sidii loo maamuli lahaa, waxa uuna tilmaamayaa sida ay maamulka dakhliga Soomaaliya u kala leeyihiin hay’adaha dowliga ah Heer Federaal iyo Dowlad Goboleed intaba. Cidda iney dakhliga dalka, nuuc kasta uu yahayba, faraha la gasho…
Xildhibaan ka tirsanaa Golaha Shacabka oo si kedis ah maanta ugu geeriyooday Muqdisho
December 30, 2018 December 31, 2018 Kalfadhi
Alle ha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), oo ka tirsanaa Golaha Shacabka ee BFS. Geerida Xildhibaanka waxaa Kalfadhi u xaqiijiyey Xildhibaano kale oo ay ka wada tirsanaayeen Golaha Shacabka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan (Cali Ganeey), oo ay qaraabo dhaw ahaayeen Korneel Ruush, ayaa ka mid ahaa Xildhibaannada Kalfadhi u xaqiijiyey geerida Xildhibaan Korneel Ruush. “Alle ha u naxariisto, goordhaw ayuu geeriyooday Xildhibaan Ruush. Xanuun deg deg ah oo dhinaca wadanaha ah ayuu u dhintay” ayuu Xildhibaan Cali Ganey ku yiri Kalfadhi.…
Xildhibaan ku geeriyooday Muqdisho iyo KGS oo ka tacsiyeysay
Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), oo lagu magacaabo Kheyre Maxamed Axmed, ayaa maanta ku geeriyooday Muqdisho. Xildhibaanku waxa uu waqtiyadii dambe ku xanuunsanaa caasimada dalka, waxaana lagula tacaalayey isbitaal ku yaala Muqdisho. Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ayaa geeridiisa ka tacsiyeysay. Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen, ayaa sheegay iney Marxuumka Illaahey uga baryayaan naxariis iyo Janno. Dowlad Goboleedka KGS, gaar ahaan Golaha Wakiilada Maamulka uu ka tisanaa ma sheegin nuuca xanuunka uu Xildhibaanku u geeriyooday iyo sida uu ahaa ka warqabkooda intuu xanuunsanaa.
Golaha Shacabka oo ansixiyey Hindisaha Xeerka Ciidanka iyo Xukumadda oo soo dhaweysay
Golaha Shacabka ayaa maanta meel mariyey Hindisaha Sharciga Hawl-gabnimadda, Xaqsiinta iyo Hibooyinka Xubinta Ciidanka Qalabka Sida. 173 Xildhibaan, oo joogtay waqtigii uu Golahu maanta marinayey hindisahaas Aqrinta 3-aad, ayaa 171 ka mid ah cod gacan taag ah ku ogolaatay hindisaha, waxaana diiday 2 Xildhibaan oo kaliya. Ma jirin Xildhibaan ka aamusay. Inta aan loo codeyn hindisahan waxaa dood ka dhalatay Da’da Hawl-gabka, waxa uuna hindisaha sharcigu dhigayaa in Muddada Hawl-gabku tahay 42 sano, taas oo dood ka dhalisay Golaha Shacabka. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig, oo ka mid ahaa Xildhibaannada diidanaa Da’da…